Intukuthelo ngomdwebo omusha kaZuma | IOL Isolezwe
Intukuthelo ngomdwebo omusha kaZuma
Isolezwe / 30 August 2012, 12:43pm /
OMUNYE umdwebo oyihlazo
oveza uMengameli Jacob Zuma evunule kodwa esina eveza izitho zakhe zangasese budlabha futhi kukhona nokuthi abusokiwe, lo mdwebo wenziwe ngumdwebi omnyama waseKapa u-Ayanda Mabulu
UMNDENI kaMengameli Jacob Zuma uthi usufisa ukwazi ukuthi ngabe yini lena ayidlela abantu njengoba kukhona abalokhu beqhubeka nokumdicilela phansi nokumehlisa isithunzi.
AbakwaZuma bakusho lokhu ngemuva komunye umdwebo ohlasimulisa umzimba obususabalele emithonjeni yabezindaba nasezinkundleni zokuxhumana odwetshwe ngu-Ayanda Mabulu waseKapa.
Lo mdwebo wakamuva ukhombisa uMengameli esina kuvele izitho zakhe zangasese ngendlela ethusayo evunule.
Umfowabo kaMengameli uMnuz Mike Zuma uthe lokhu sekubaqeda amandla ngoba babona ukuphela kwenhlonipho nokudelelwa okungabekezeleleki okubhekiswe kuMengameli.
“Umfowethu yini lena engaka kanti ayenza uma esalokhu ehlukunyezwa kangaka, phela lo muntu ungubaba wekhaya futhi uphinde abe nguMengameli wezwe lonke ngakho yini abantu belahlekelwa inhlonipho ngoba kufanele engabe bayamhlonipha bamvikele hhayi le nto eyenziwayo,” kusho uMnuz Mike Zuma.
Uthe kade babesho ukuthi laba bantu abalokhu bedweba umengameli ababoshwe ngoba abadeleli nje yena uqobo noma umndeni wakhe kodwa badelela isizwe sonkana futhi bahlasela nesithunzi sehhovisi lakhe uqobo.
Lo mdwebo obizwa ngokuthi “uMshini Wami” osesikhungweni sombukiso eKapa i-Ava Gallery ulandela okaBrett Murray obizwa nge-The Spear owawuseGoodman’s Gallery eGoli nawo owawuveza uZuma egqoke ijazi elikhulu eveze isitho sakhe sangasese.
Lowo mdwebo kaMurray wasusa umsindo kwakhalwa nangokuthi ukhomba ukuthi abamhlophe basababukela phansi abamnyama.
Okhulumela i-ANC uMnuz Keith Khoza, uthe lokhu kuyakhombisa ukuthi kunabantu abangazimisele ukuhlonipha uMengameli futhi abanenzondo engachazeki njengoMabulu.
“Esikubonayo lapha ukuthi sekukhona abantu asebezama ukuzakhela igama ngoMengameli. Ngaphandle kwalokho okusiphatha kabi ukuthi kukhona asebesebenzisa ubuciko ngendlela eyinhlamba bese bethi baveza amakhono abo okuyinto engamukelekile ngoba akekho umuntu onelungelo lokuhlukumeza omunye aphinde aveze izitho zakhe zangasese ngale ndlela,” kusho uKhoza.
Uthe yize lo mdwebo wenziwe umuntu omnyama kodwa basamile ukuthi lo waya wokuqala kaMurray wawukhomba ukuthi abamhlophe basababukela phansi abamnyama ngoba abakaze badwebe uMengameli omhlophe.
Lo mdwebo oveza uMengameli ebeke obala isitho sakhe sangasese ubiza imali engu-R75 000 e-Ava Gallery eKapa.
Ecashunwa uMabulu uthe akukho lapho umdwebo wakhe ukhombisa indelelo kuZuma ngoba umveza egqoke imvunulo yesintu ayikhonzile. Uqhuba uthi ukhombisa uZuma egiya eqephuza kodwa abantu bebe bebulawa yindlala.